Ihe 5 kacha elu nke na-egbu ndị na-erubere ndị ahịa isi | Martech Zone
Otu akụkọ m na-akọrọ ndị ụlọ ọrụ bụ na m rụrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ nke sitere na ndị ọrụ ole na ole gaa zụta ọtụtụ ijeri dollar - na ahụmịhe onye ọrụ ahụ jọgburu onwe ya. Chọpụta, e nwere akụkụ nke usoro ndị a asọmpi uru… ma n'ihi na ọtụtụ akụkụ, ọ bụ ihe nro. Ihe mere ụlọ ọrụ ahụ ji karịa echiche onye ọ bụla bụ ihe atọ - ire ​​ere, ire ahịa na ọrụ ndị ahịa.
Ebe ikpo okwu a kọrọ, njikwa akaụntụ na ndị ọrụ nkwado ndị ahịa emeghị ihe dị iche - ha gafere atụmanya niile. Site na mgbasa ozi mgbasa ozi na saịtị nyocha, mmetụta na-adịghị mma na nke ọma nke ịmara ọha na eze abụghị ihe dị ukwuu maka ọrụ ndị ahịa, ọ dịkwa mma maka inweta ahịa.
Isi ihe nnochie 5 kacha eme ka mbelata na iguzosi ike n’ihe nke ndị ahịa
Na-ebufe n'etiti ndị ọrụ.
Enweghị nzaghachi na email.
Ogologo oge ejidere.
Enweghị ike iru mmadụ.
Ndị ọrụ amaghị.
Ya mere… ihe a mụtara ebe a bụ na nkwukọrịta bụ isi ihe dị ukwuu nye ọrụ ndị ahịa yana iguzosi ike n'ihe ndị ahịa! Njikwa akaụntụ na ọrụ ndị ahịa abụghị naanị ihe efu maka ụlọ ọrụ, ha bụ ụlọ ọrụ bara uru na-enweghị atụ na nloghachi dị mma na itinye ego. Akụkọ ọjọọ bụ na ọ dịghị onye na-eme ya nke ọma.
Tags: njikwa akaụntụchurnezi ndị ahịaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịadmc ngwanrọ ngwọta